Kodzero-dzevanhu, 19 Kukadzi 2019
Dare reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekurambidza bazi remuchuchusi mukuru wehurumende, reNational Prosecuting Authority kushandisa vechiuto kana mapurisa sevachuchusi mubazi iri sezviri kutika parizvino, richiti izvi hazviendarane nebumbiro remutemo wenyika.
Doctor Charles Mungoshi Vanoradzikwa Zvine Mutsindo kuChivhu
Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose, Doctor Charles Mungoshi, waradzikwa kuManyene kuChivhu mudunhu reMashonaland.
Vaimbove Mutungamiri weNyika, VaMugabe neMudzimai Wavo Voramba Vari paZvirango zveEuropean Union
Sangano reEuropean union razivisa kuti vaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe, vacharamba vari pasi pezvirango zvehupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, kunyangwe hazvo vasisiri pachigaro.
Nhengo dzeParamende dzeZanu-PF, MDC neMamwe Mapato Dzotanga Nhaurirano
Nyika dzakawanda pasi rino dziri kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe kuti aite nhaurirano sezvo zvinhu munyika zvaramba zvakaita manyama amire nerongo.
EU Nhasi Yozeyazve Nyaya yeKutemera VaMnangagawa neMamwe Makurukota Avo Zvirango
Makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reEuropean Union ari kusangana muBrussel, Belgium nhasi kuti vazeye kurudziro yakaitwa nenhengo dzavo dzeparamende nemusi weChina kuti sangano iri riwedzere nekusimbaradza zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yeZimbabwe.